तामाङ महिला मुद्दामाथि तामाङ साहित्यको चेतना -
३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार १०:४५ । काठमाडाैं
(बिना थिङ तामाङ कथाकार हुन् । उनी नेपाली र तामाङ दुबै भाषामा कथा लेख्दै आइरहेकी छन् । मायालु ङेसुर तामाङ साहित्यीक संस्था ‘तामाङ डाजाङ’का पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनी पन्ध्र वर्षदेखि काभ्रेमा महिला बेचविखन विरुद्ध अभियानमा छिन् । सन्चु ब्लोन डाजाङका वर्तमान अध्यक्ष हुन् । तामाङ डाजाङ मासिकले ‘तामाङ महिला मुद्दामाथि तामाङ साहित्य चेतना’ विषयमा तीन जना स्रष्टा एवं अभियन्ताहरु बीच छलफल आयोजना गरेका थिए । छलफलमा व्यक्त विचारहरु सन्दर्भिक रहेकाेले त्यसकाे सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ । – स.)
अर्को कुरा तामाङ महिलाहरुमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आरोपित बेचबिखनको मुद्दा अहिलेसम्म तामाङ साहित्यमा कहि कतै आएको देखिएको छैन । म विगत दश पन्ध्र वर्षदेखि महिला बेचविखन विरुद्धको अभियानमा क्रियाशील छु । किन हाम्रा दिदीबहिनीहरु बेचिए ? बेचिनका कारणहरु के के छन् ? सिन्धुपाल्चोकका तामाङले बाउले छोरी किन बेचे ? यसो सोच्दा बाउले छोरी कही बेच्न सक्छ त ? असम्भव जस्तो लाग्छ । साहित्यमा मात्र होइन तामाङ मिडियाकर्मीहरुले पनि बाउले छोरी किन बेच्छन् ? त्यसको पछाडि के कारणहरु छन् ? त्यसको खोजि गरेनन् । अझ अहिले वैदेशीक रोजगारीको नाममा भएको तामाङ दिदीवहिनीहरुको बेचबिखन विकराल देखिएको छ । अस्ति भरखरै रसुवाका एकजना तामाङ बहिनीको इराकबाट उद्धार भयो उनी तेह्रहजार डलरमा बेचिएका थिए । उद्धारका लागि रवि लामिछानेको …सोले मद्दत पुर्याएका थिए । यस्ता धेरै समस्याहरु छन् जो साहित्यले उठाउन सक्छन् । मिडियाले पनि उठाउनु पर्यो त्यसको खोजि गर्नु पर्यो तर त्यो गर्न सकिएको छैन ।